Kamp Kontent - The Hillside Cottage - I-Airbnb
Geneseo, New York, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Leah
Jabulela ukubuka ichibi kule ndlu eyakhiwe ngamapulangwe ethokomele, enekamelo lokulala elilodwa e-Conesus Lake. Ama-acres ayisithupha emizila yemvelo, inkundla ye-baseball, amabhayisikili asezintabeni nama-kayak ayatholakala futhi. Imizuzu ukusuka emigoqweni yasendaweni, izindawo zokudlela nezindawo zewayini. Kulungele izilwane ezifuywayo! Sicela uqaphele ukuthi izivakashi kufanele zihlele ukuletha amalineni azo, izingubo zokulala, imicamelo namathawula. Uma lokho kungenakwenzeka, singazinikeza imali eyengeziwe.
Le ndlwana iyingxenye yendlu enkulu ebizwa ngokuthi yi- "Kamp Kontent" eyayikade iyikamu lezingane ngeminyaka yoo-1960. Siqashisa indlwana eyinhloko ("Indlu Eyinhloko") unyaka wonke futhi nezindlu ezakhiwe ngamapulangwe ezine ezincane ("i-Lake View Studio", "Indlu Eyakhiwe Ngamapulangwe Ehlathini", "Indlwana Yase-Hillide" kanye "ne-Bunk House") ehlobo.
I-Deer Run Winery
Hello and thanks for your interest our property! My family and I have been operating Kamp Kontent since 2011. We love to meet new people and help you make the most of your stay i…
Sihlala eduze ukuze sitholakale ngemibuzo noma ukukhathazeka!
Hlola ezinye izinketho ezise- Geneseo namaphethelo